Showing १४१-१५० of १८० items.
आईजीपीको भाञ्जे ज्वाई र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको विश्वास पात्र भन्दै ठगी
विराटनगर / विराटनगरमा तीनवटा घर भाडामा लिएर नक्कली विद्युत्त परियोजना र विजनेस मेनेजमेन्ट ग्रुप खोलेर ठगी धन्दा चलाउने गुणराज ओझाले उजुरी गर्ने कर्मचारीलाई ज्यानमार्ने धम्की दिएका छन् । ओझाबाट ठगीका ५० भन्दा बढीले कर्मचारीले श्रम कार्यालयमा उजुरी गरेपछि निवेदन दिने कर्मचारीलाई ओझाले ज्यान मार्ने धम्की दिएका हुन् । प्रहरी महानिरीक्षक सर्बेन्द्र खनाल आफ्नो भाञ्जे ज्वाईँ भएको बताउँदै विराटनगरमा खुल्लेआम हिडडुल गर्ने उनले कर्मचारीलाई फोन र एसएमएसबाट धम्की दिएका हुन् । ‘तपाईँको पनि परिवार छ होला भन्दै धम्की दिइरहेका छन’, नितेश खतिवडाले भने, ‘शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै प्रशास
एकै वर्षमा बढायो उद्यमशील बचतले डेढ करोड निक्षेप
धरान । उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारीले ५ करोडभन्दा माथि निक्षेप संकलन गर्न सफल भएको छ । छैठौं साधारणसभाको अवसरमा सोमबार सहकारीले ५ करोड २ लाख ७७ हजार ४ सय ९१ रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्न सफल भएको जनाएको छ । अध्यक्ष डा. योगेन्द्र राईले लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेक्रममा अघिल्लो आर्थिक वर्र्षभन्दा एक करोड ४७ लाख ८६ हजार ६३२ रुपैयाँले बढी भएको बताए । सहकारीले छोटो समयमै ७० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७० करोड ९४ लाख १७ हजार ४५५ रुपैयाँ कारोबार गरेको हो । यो अघिल्लो आवभन्दा झण्डै २६ करोड ७० लाख ४६ हजार ३९० रुपैयाँले बढी हो । संस्थाले एक करोड १० लाख ९४ हजार
काठमाडाैं / २०७१ साल साउन सकिन लाग्दा काभ्रे पनौतीकी एक किशोरीको ‘सुसाइड नोट’ भेटियो । जसमा लेखिएको थियो– ‘हजुरबुबा र बुबाको श्रीमती बनेर बाँच्नुभन्दा मर्नु ठीक लाग्यो ।’ मृत्यु रोज्ने उनको दर्दनाक कथा–व्यथा १० वर्षको उमेरमा आफ्नै ६५ वर्षीय हजुरबाले बलात्कार गरेपछि शुरू भएको थियो । त्यो सिलसिला करीब ६ महीना चल्यो । विदेशमा रहेका बाबु फर्केपछि उनले बाबुलाई त्यो कुरा सुनाइन् । बाबुले ‘त्यति बूढो मान्छेले पनि त्यस्तो गर्छ र !’ भने । उनका बाबुका चार श्रीमती थिए । उनी माइलीपट्टिकी जेठी छोरी थिइन् । १३ वर्षकी हुँदा बाबुले नै उनलाई बलात्कार गरे ।
९९९ पटक पढिएको
अागलागीमा ३ महिनाकाे शिशुसहित एकै परिवारका चार सदस्यकाे मृत्यु
झापा/ झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर ७ लाल्झोड़ामा एकै परिवारका चार सदस्यको घरमा अचानक लागेको आगलागीका कारण मृत्यु भएको छ । राती १०:१५ बजेको समयमा उक्त आगलागी भएको हो , भानु माध्यमिक बिद्यालयबाट २० मिटर नजिक रहेको खनाल परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको सुतिरहेको अवस्थामा आगलागी भएको इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिले प्रहरी निरिक्षक कैलाश राईले जानकारी दिए । मृत्यु हुनेमा ३६ वर्षिय लक्ष्मन खनाल, ३० वर्षिय राधिका खनाल, ४ वर्षिय सुप्रिया खनाल तथा ३ महिनाका टिकाराम खनाल रहेका छन् । आगलागी के कारणले भएको हो भन्ने प्रहरीले अनुसन्धान भैरहेको जानकारी दिएको छ ।
१,१२३ पटक पढिएको
महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानमा वर्षेनी लाखौं बजेट सिद्धिए पनि उक्त बजेट ‘बालुवामा पानी’ हाले झैं भएको छ । एक रिपोर्ट : आइतबारदेखि देशव्यापी रूपमा महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान शुरू भएको छ । तर, तथ्याङ्क केलाउने हो भने वर्षेनी महिलामाथि हुने हिंसा बढेको बढ्यै छ । अभियान औपचारिकतामै सीमित छ । बजेट सक्नका लागि मात्रै अभियान गरेको भान हुन्छ । महिला हिंसासम्बन्धी प्रहरीको तथ्याङ्क केलाउने हो भने वर्षेनी हिंसा घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ । देशभरको तथ्याङ्कले यस्तै देखाउँछ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तथ्याङ्कअनुसार देशभर महिला तथा
धरान / उदयपुरको बेलका नगरपालिका ६ मा अर्काको मोटरसाईकल सिक्दै गर्दा पुलको पोलमा ठोक्किए दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बराह–६ का शैलेस माझी र सोही वडाका जितेन राई रहेका छन् । पश्चिमबाट पूर्व आउदे गर्दा बेलका ९ स्थित खोरिया पुलमा को २२ प २३४३ नं. को मोटरसाईकल ठोक्किदा शैलेसको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । राईको भने उपचारको क्रममा विपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा आईतबार राती मृत्यु भएको स्थानीय सरद कोईरालाले जानकारी दिए ।शैलेसले हाकेको मोटरसाईकल एक्कासी पुलमा ठोक्किएको थियो । चन्दमणी ज्यवलरीमा मिस्त्री काम गर्दै अाएका सुवाेद चाैधरीकाे मोटरसाईकल विहान कसैलाई नस
७४६ पटक पढिएको
धरानबाट १२ केजी गाँजासहित दुई पक्राउ(भिडियाे समाचार)
धरान / १२ केजी लागूऔषध गाँजासहित शनिबार राती एक युवालाई पक्राउ गरेको छ ।पक्राउ पर्नेमा धनकुटा सागुरीगढी गाउँपालिका–९ का ३३ वर्षिय बिष्णु राई रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ । धरान–२० बिष्णुपादुका स्थित भन्ज्याङबाट राती साढे १० बजे ‘सप्राइज चेकिङ’को क्रममा को ३० प ७३५५ नम्बरको रातो पल्सर मोटरसाइलमा पछाडी बसेर ल्याउदै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी निरीक्षक अशोककुमार जबेगूले जानकारी दिए । मोटरसाइलक चालक भने फरार रहेको उनले बताए । अहिले गाँजाको सिजन भएकोले पहाडी क्षेत्रबाट आउनेलाई विशेष निगरानी राखिएको प्रहरीले जनाएक
प्रकाशित मितिः मंसिर ९, २०७५
१,०७० पटक पढिएको
निर्मला हत्या र १६ दिने महिला हिंसा अभियान
आजबाट १६ दिने महिला हिंसाविरुद्धको अभियान प्रारम्भ भएको छ । ठिक यही बेला हामी एउटा यस्तो कहाली लाग्दो घटनाबाट गुज्रिरहेका छौं । जसको न्याय हाम्रो लागि भारी परिरहेको छ । हो, कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त हत्याकाण्डको गुत्थी सुल्झिन सकेको छैन । यही पेरिफेरिमा हामी १६ दिने अभियान हाेमिएका छाैं । यो अभियान निर्मला जस्ताका लागि व्यङ्ग्यात्मक बन्दै छ । निर्मलाका परिवारको लागि प्रश्नैप्रश्नले जेलिएको अभियान बन्दै छ । चार महिनाको अवधिमा निर्मलाको परिवारले न्याय पाउनु त कता–कता ? उल्टै परिवार मानसिक अवस्थाबाट गुज्रिदै छ । निर्मलाका बुबा यज्ञराज पन्त न्यायका लागि अनिश्चितकालीन धर्नामा बसिरहेकै बेला स्व
गोपाल विद्यालयको सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थी थियो । परीक्षामा सधैँजसो गाली र सजायको ठेक्का बोकेको उसमा सबैको नजर पथ्र्याे । जसरी जान्ने विद्यार्थीमा माया वर्षिन्छ, त्यसैगरी पढाइमा कमजोर भएको उसमा पनि प्रायः शिक्षकलगायत घरपरिवारको उत्तिकै गाली वर्षिन्थ्यो । एकदिन डाँडागाउँबाट उसको घरमा मामा आउनुभएको थियो । उहाँले उसलाई माया गरेर भन्नुभयो, ‘ओहो १ भान्जाबाबू त लाठे भइसकेछन्, अनि पढाइ कहाँ पुग्यो ?’ मामाको स्वर एकाएक उसकी आमाको कानसम्म पुगेपछि आमाको क्रोध वर्षिन थाल्यो, ‘यसको के कुरा गर्नु, भुस छ भुस, यसको पढाइको कुरा नसोध भाइ । यसलाई खेल्न पाए पुग्छ । दोस्रो त्रैमासिक परीक्ष
कुन पुरुषको शुक्रकीट कुन महिलाको पाठेघरमा पुगेर म जन्मिएँ मलाइ थाहा छैन । सन्तानको रहरले जन्मिएको हुँ वा जवानीको रहरले? मैंले कहिल्यै यो प्रश्नको जवाफ पाइन । मातृदूधको स्वाद कस्तो हुन्छ भनेर कसैले मलाइ सोधेन । कसैले त्यो नसोधेरैे ठीक ग¥यो । सोधेको भए उत्तर पाउँदैनथ्यो होला । सायद उत्तर पाएको भए पनि बजारमा बट्टामा पाइने पाउडरको दुधजस्तोे पाउने थियो होला, नमीठो । नसोध्ने त्यो कसैप्रति आभारी छु । मलाइ हुर्काउने आमा कुमारी थिइन । अर्थात उनको विवाह भएको थिएन । मेरी आमा घरकी एक्ली छोरी थिइन् । आमा सुन्दर थिइन्–दुधकोशीको वगरमा हुर्केकी जस्ति । आमाकी आमा अर्थात मेरी हजुरआमाले मलाइ साह्रै माय